ပသီလူမျိုးသည် တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ရပ်တည်နှိုင်သည်။ | Lumyo Chit
October 1, 2011	By lumyochit	အမှာစာ ( Preface)
ပသီလူမျိုးသမိုင်း အထောက်အထားများအရ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ရပ်တည်ခွင့်ရှိ သောလူမျိုး တစ်မျိုးဖြ စ်သည်။အောက်ပါအကိုးအကားဖြင့်ဆက်လက်တင်ပြပါသည်။
၁၈၂၃ မတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံသို့ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် လာနေထိုင်ကြသော မွတ်ဆလင်များ သည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေ များဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။စစ်အစိုးရက လက်
ထက်က အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်များကို ဖိနှိပ်ထားခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ရပ်တည်ခွင့်မရဘဲနစ် နာ နေ ခဲ့ပါသည်။သို့ဖြင့်အောက်ဖေါ်ပြပါ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ၊ နိုင်ငံသားဥပဒေ အရ ပသီလူမျိုးသည်လည်း တိုင်းရင်း သား လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ရပ်တည်ခွင့် ရှိပါသည်။ပသီလူမျိုးနှ င့်ဆိုင်သောအထောက် အထားမျာကိုစုစည်း၍ ပသီလူမျိုး အ တွက် သီးသန့်ဝပ်ဆိုဒ် https://lumyochit.wordpress.com/ တွင် တင် ပေးသွား ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်း( ၂ )တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အောက်ပါ အတိုင်းဖေါ်ပြထားသည်။
ပုဒ္မ – ၃ – နိုင်ငံတောတွင်ပါဝင်သောနယ်မြေတစ်ခုခု`၌ မ်ြမာ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခှုစ် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ -ခု မတိုင်မီကာလမှစ၍ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်အဖြစ်အမြဲနေထိုင်ခဲ့သော ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် တိုင်းရင်းသားများနှင့်မျိုးနွယ်စုများသည် မ်ြမာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ပုဒ္မ – ၅ – တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည်လည်ကောင်း၊တိုင်းရင်းသားမိဖ နှစ်ပါးမှမွေးဖွါးတိုင်းသည်လည်း
အထွေထွေက`ဏ္ဍ ပါ ပုဒ္မ – ၇၅ – ဤဥပဒေပြဌန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှါ ဝန်ကြီးအဖွဲ့
သည်လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ((ယခု ပြည် ထောင်စုအစိုးရ) ၏
တိုနိုင်ငံ သားဥပဒေ ပုဒ္မ ၇၅ ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၁၃/၈၃ ဖြင့်(၂၀-၉-၈၃) နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးနည်းများ (နိုင်ငံသား ဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးနည်း) ၏ အခန်း (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခန်းတွင် – အပိုဒ် – ၄- ၁၈၂၄ ခှုစ်တွင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ ထိုကာလ၏နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားသားအများအပြားမြန်မာနိုင်ငံ တော် အ တွင်း သို့ ဝင်ရောက် နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင်း မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်၊ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခု မတိုင်မီ ကာလ ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အပိုဒ် – ၅ – တွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဇမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့်လူမျိုးများပင်ဖြစ်စေကာမူ နိုင်ငံ တော်တွင်ပင်ရင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားနိုင်ငံတော်တွင် ပင်ရင်နိုင်ငံအဖြစ်အမြဲနေ ထိုင်ကြ သူ များ သည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါ။ ၁၈၂၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နေ
ထိုင်ကြသော အမည်တူ မျိုးနွယ်စုများသည်လည်း တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့်အပြင် မွေးရာပါ နိုင်ငံ သားလည်းမဟုတ်ပါ။
အပိုဒ် – ၇ – တွင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ နိုင်ငံတော်ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၁၄၅ ၊ပုဒ္မ ခွဲ (ခ)
အရအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သည့် ၁၅ -၁၀ – ၈၂ (ယခု ၂၀၀၈ ခု ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ)
နေ့တွင် နိုင်ငံသားဖြစပြီးသူများသည် နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ စသည်ဖြင့်ဖေါ်ပြထားသည် ကိုတွေ့ ရှိရသည်။
မြန်မာအတွင်းသို့ ရောက်ရှိအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များမှာ (၁) အာရဗ်များ၊ (၂) ပါရှန်း၊ (၃) တရုတ်၊ (၄) ကသည်းများ၊ (၅) အိန္ဒိယသားများနှင့် (၆) အခြားလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ (၁) အာရပ်များ ပုဂံခေတ် ပိဿုံမင်းလက်ထက် အေဒီ(၇)ရာစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့များဖြစ်သည့် သထုံ၊ မုတ္တမသို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြခဲ့သည်။ ရခိုင်ဘုရင် မဟာ တိုင် စန္ဒလက်ထက် (အေဒီ ၇၈၈-၈၁၀)တွင် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်၍ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျား တရုတ်ပြည် သို့ကုန်ကူးရာ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီးတွင် သင်္ဘောပျက်၍ ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အေဒီ(၁၄)ရာစုတွင် ကုန်သည်တချို့သည် မြိတ်မြို့တွင် ၀င်ရောက် နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ (၂) ပါရှန်းများ အာရဗ်ကုန်သည်မျးနည်းတူ ကုန်ကူးသန်းရာမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေဒီ(၁၃)ရာစု တွင် ယခင် ပသီမြို့(ယခု ပုသိမ်)ကို ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြ သည်။ ပုသိမ်မြို့ကို ကုလားပသီမင်း (၃)ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ (၁) ပသီမင်း[နန်းစံသက် ၈-နှစ်] (၂) အော်လန်တေးမင်း[နန်းစံသက်-၁နှစ်] (၃) အက္ကဘတ်မင်း[နန်းစံသက်၃-နှစ်] (၃) တရုတ်များ မြန်မာသက္ကရာဇ်(၆၄၃)ခု နရသီဟပတေ့မင်း(တရုတ်ပြေးမင်း)လက်ထက်တွင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း တရုတ် ပြည်ဘက်တွင် တရုတ်မောင်းဂွတ်ဘုရင် ကုဗလေခန်ရဲ့ တာရ်တာရ်စစ်သည်များ ပုံဂံကိုဝင် ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၂၈၁-ခုနှစ်၊ ဒုတိယတရုတ်မြန်မာစစ်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး နဇရွတ်ဒင်ခေါင်းဆောင်သော တာရ်တာရ် စစ်သည်များသည် ကောင်းစင်(ယခု ဗန်းမော်မြို့)ကို သိမ်းပိုက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၄) ကသည်းများ ၁၈၂၁-ခုနှစ်တွင် မဟာဗန္ဓုလဦးစီး သည့် တပ် များသည် အာသံ(ကသည်းပြည်)သို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ အောင်နိုင်သဖြင့် ကသည်း သုံ့ပန်း (၄၀၀၀၀)ကျော် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ထက်ဝက်ခန့်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များဖြစ်သည်။ (၅) အိန္ဒိယ သားများ အိန္ဒိယပြည်ဘက်မှလည်း အိန္ဒိယ၊ မဂိုများ၊ ဘင်္ဂါလီများသည် ကုန်းကြောင်းမှနေ၍ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ဥဒယိုဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ကြသည်။ အနောက်ဘက်လွန်မင်း (၁၆၀၅-၁၆၂၈)ခုနှစ်တွင် တောင်ငူဘုရင် နတ်သျင်နောင် နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားရာ နတ်သျင်နောင်က သံလျင်စား ငဇင်ကာထံ အကူအညီတောင်းခံသဖြင့် ငဇင်ကာက သင်္ဘော (၄)စီးစေလွှတ်ခဲ့ရာ အစ္စလာမ်သာသနာ ၀င်များပါဝင် ခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင် အနောက်လွန်မင်းကစစ်နိုင်သဖြင့် ငဇင်ကာ နှင့် နတ်သျင်နောင်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့ သည်။ သုံ့ပန်းများကိုမသတ်ဘဲ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအား နေရာအတည်တကျချထားပေးပုံ အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးသည် စစ်သုံ့ပန်းများကို အင်းဝမြို့၊ မြစ်သာမြစ်မြောက်ဘက်တွင် နေရာ အတည်တကျချထားပေးခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် များ အတွက် ရွှေဘို၊ ကျောက်တည်၊ စစ်ကိုင်းနယ်များတွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရန် မြေနေရာများ ကို တည်တကျချထားပေးခဲ့သည်။ စနေမင်းလက်ထက် (၁၆၂၈-၂၆၄၉)ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ် သာသနာဝင် များအတွက် တောင်ငူ၊ ရမည်းသင်း၊ ညောင်ရမ်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ၊ ပင်းယ၊ တဘက်ဆွဲ၊ ဘောဓိ၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ၊ မြေဒူး၊ ဒီပဲရင်း စသော မြို့ကြီးများတွင် နေရာအတည် တကျ ချပေးခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းခေတ်လွန် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းလက်ထက် (၁၈၀၁) – ခုနှစ်တွင် အမရပူရနယ်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် ဗုံးအိုး၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စားကြင်ဝရွာများတွင် နေရာအတည်တျကချပေးခဲ့သည်။ နောင်အခါ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆက်နွယ်ပေါက်ဖွားလာသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများ သည် ရမည်းသင်း၊ ယင်းတော်၊ ပျဉ်းမနား အစရှိသည့်မြို့ကြီးများတွင် အစုအဝေးလိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများမှာ ဗမာဘုရင်များလက်ထက်တွင် ပသီလူမျိုးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၄၇၀၊ ၄၈၂၊ ၅၁၄)၊ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး တတိယတွဲ စာမျက်နှာ(၆၊ ၈၆၊ ၉၀၊ ၁၃၅၊ ၂၃၆၊ ၃၁၉) တို့တွင် ပါရှိသည့်အထောက်အထားများအရ ဗမာဘုရင်များလက်ထက် တွင် ပသီလူမျိုးအဖြစ် အခိုင်အမာ တည်ရှိ ခဲ့သည်။ ဗမာပြည်အား အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့များ သိမ်းယူပြီး နောက်ပိုင်းမှစ၍ ၁၉၃၁-ခုနှစ်အထိ ပသီလူမျိုးများအား ဇေတဘာဒီလူမျိုးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရ သူများဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁-ခုနှစ်မှ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိ ဗမာမွတ်စလင်မ်များဟု အသိအမှတ် ပြုခြင်း ခံနေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်မ် တနည်းအားဖြင့် ပသီများဟု သတ်မှတ် ခံနေရသူများသည် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ မျိုးတူစုတစ်စုတည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သွေးတူစု၊ ဇာတ်တူစုတစ်စုတည်းမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုးသည် လူမျိုးပေါင်းစုံမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာတတ်ခြင်းကို အောက်ပါသာဓကများအရ သိနိုင် ပေသည်။ ယနေ့ဗမာလူမျိုးသည် ဗမာလူမျိုးအဖြစ် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ (ပျော့၊ ပျူ၊ ကမ်းယံ၊ သက်၊ ရခိုင်၊ ထားဝယ်၊ တိဘက်)စသည့် လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားထင်ရှားကျော်ကြားသည့် လူမျိုးအချို့သည်လည်း ဤနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် အီတလီ လူမျိုးများသည် ကျူထရွန်၊ အီထရပ်စက်၊ ရောမ၊ ဂရိတ်၊ အာရဗ် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှော ပေါက်ဖွား လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများသည်လည်း ဂေါ်လ်၊ ဘရီထွန်၊ ကျူထရွန် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှော ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်များ (၀ါ)ပသီများ သည်လည်း နိုင်ငံခြားမှလူမျိုးတစ်မျိုး၊ အိမ်ထောင်စုများမှ ဆင်းသက် လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အထက်ဖော်ပြပါလူမျိုးများမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်မှာ အခိုင်အမာပြနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ ဘုရင် များ လက်ထက်တွင် နေထိုင်ရန်ဒေသများထူထောင်ပေးပြီး ပသီလူမျိုးအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုခဲ့ခြင်း မှာ ရာဇ၀င် အစောင်စောင်တို့အရ ထင်ရှားပေသည်။ လူမျိုးဆိုသည်မှာ ‘လူမျိုးဆိုသည်မှာ အခြေခံ အားဖြင့် လက္ခဏာ(၄)ရပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။
ကိုကိုလေး(ဗပက) @ ပသီဦးကိုကိုလေး။ ၁၉၅၀ ကျော် ၆၀ ၀န်းကျင်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “ခေတ်(၅) ခေတ်နဲ့ လူတန်းစားပြဿနာ”ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေ ကောက်နှုတ်ပြီး ၂၀၀၅-ခုနှစ်လောက်က နေရာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းများကို မူရင်းစာအုပ်ထဲမှအတိုင်းသာ ကူးယူထားပါသည်။
This entry was posted in Pathi and tagged Hidtory. Bookmark the permalink.
← Hello world!	အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ →